सरकारको विरोध प्रदर्शनबारे बोलिन् मनिषा कोईराला - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
सरकारको विरोध प्रदर्शनबारे बोलिन् मनिषा कोईराला
अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले सरकारविरुद्ध युवाहरुले गरिरहेको प्रदर्शनको ‘टाइमिङ’ माथि प्रश्न उठाएकी छन् । कम्तिमा आजको दिन सरकारलाई सडकबाट दवाव दिनु उचित नभएको आशय उनको छ । नेपालको संसदले आज देशको नयाँ नक्शालाई आधिकारिकता दिने गरी संविधान संसोधन गर्दैछ । त्यसैले आजको दिनमा सरकारविरोधि प्रदर्शन नगर्न सामाजिक सञ्जालमा धेरैले आग्रह गरेका थिए । तर, प्रदर्शन रोकिएन ।
Baini, I understand but Nepali youth are well informed and educated..I was hoping they would let this day be as for the first time Nepali political parties are standing for nation!! the protest could hv started again tomorrow .. this has definitely putaquestion in my heart! https://t.co/vy4J8LuBVf
यसलाई लिएर नै मनिषाले असन्तुष्टी व्यक्त गरेकी हुन् । टि्वटरमा मनिषाले लेखेकी छन्, ”(प्रदर्शनको) टाइमिङ निश्चितरुपमा प्रश्न उठाउन योग्य छ । मैले सँधै महसुस गरेकी छु कि सरकार पारदर्शी हुनुपर्छ । तर, यसले अहिले यति ठूलो कदम चाल्न लागिरहेको छ । प्रदर्शनमा किन यसलाई समर्थन थोरै मात्रै मिलिरहेको छ ? आजकै दिन कि उनीहरु सरकारमाथि दवाव दिइरहेका छन् ?’
I am proud of the youth baini,hence I expect frm thm too..today isaday of unity..you have all the days fr voicing your concerns ??they all are valid concerns..I started seeing ray of hope..its th’next generation who will lead the country hence be more vigilant and responsible!! https://t.co/wdGaVEwbNZ
केही दिनअघि मन्त्रीपरिषदले नेपालको नयाँ नक्शा पारित गर्दा पनि मनिषाले त्यसको समर्थनमा टि्वट गरेकी थिइन् । उक्त टि्वटलाई लिएर भारतीय मिडियाहरु मनिषामाथि खनिएका थिए । भारतीयहरुले सामाजिक सञ्जालमा उनीमाथि तथानाम गाली गरेका थिए । एक साताअघि मनिषा परिवारसहित भारतबाट नेपाल फर्केकी छन् । उनी एउटा होटलमा क्वारेन्टाइन बसिरहेकी छन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शनिवार, जेठ ३१ २०७७ १५:१३:१८